चारजना रिहा::Hamro Koshi Awaj / awaz
रिहा भएपछि जे देखियो (११ तस्वीर र भिडियो)
धरानः सर्वाधिक चासो, चर्चा र विवादित बनेको धरान–११ की सिंगापुरे लाहुरेकी श्रीमती सुनिहाङ्मा लिम्बू मृत फेला प्रकरणको विवाद सतहमा आएको छ ।
किटानी जाहेरीपछि पक्राउ परेका चारजना धरौटीमा रिहा भएका छन् । पुर्पक्षको निमित्त भएको छलफलमा दुवैपक्षका कानुन व्यवसायीहरूको दुईदिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आएको आदेशअनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा जनही चार प्रतिवादी उपस्थिति गराइएको निजको हकमा जनही एक लाख ५० हजार धरौटी लिई तारिखमा राख्ने आदेश भएको र सो बमोजिम निजले धरौटी राखी रिहा भएको सरकारी वकिल गोकुल निरौलाले जानकारी दिए । ‘उनीहरू धरौटी बुझाएर मङ्गलबार तारिखमा छुटेका छन्’, उनले भने ।
यसअघि केटीपक्षले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले केटापक्षका आफन्तलाई करिब २६ दिन राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धान, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा रिपोर्टले आत्महत्या भएको देखाएको उनले जानकारी दिए ।
माइतीपक्षले हत्या गरेको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिएपछि यो घटनाले अर्को मोड लिएको थियो तर फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेपछि यो नयाँ सिराबाट अघि बढ्न थालेको हो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो । मिसिल बुझाएपछि आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत सुनसरीमा ४ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
पोष्टमार्टम रिपोर्ट र भिसेरा
पोष्टमार्टम रिपोर्टमा सुनिहाङमाले आत्महत्या नै गरेको जनाइएको छ । ‘चिकित्सकको रिपोर्टमा मृत्युको कारण आत्महत्या भन्ने छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर पनि कर्तव्य ज्यानमुद्दामा अभियोग पत्र दर्ता गर्न मिल्दैन थियो, त्यही भएर थुनछेक बहस अगाडि बढाइएको हो ।’
गत भदौ २२ गते उनी मृत फेला परेकी थिइन् । कोठामा मृत फेला परेकी उनको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोष्टमार्टम गरेपछि धरानस्थित खत्रीधारामा उनको अन्त्येष्टी गरिएको थियो । शुरूमा केटीपक्षले मात्रै लाश जलाउने भनिएपनि मौखिक सहमतिमा केटापक्षका पनि सहभागी बनेर लाश जलाइएको थियो ।
के थियो केटीपक्षको दावी ?
उनी धरान उपमहानगरपालिका–११ स्थित घरको कोठामा मृत फेला परिन् । सोनीको माइतीपक्षले आत्महत्या नभई सोनीको हत्या भएको दावी गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो ।
माइती पक्षले उनको मृत्युबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा किटानी जाहेरी नै दिएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले सत्यतथ्य छानविन नगरेसम्म पोष्टमार्टम पनि गर्न नदिने भनेका थिए । किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले जसका नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेपछि मात्रै उनको पोष्टमार्टम भएको थियो ।
के थियो केटापक्षको दावी ?
केटापक्षका आफन्तले सोनीले आत्महत्या नै गरेको बताएका थिए । माइतीपक्षले लगाएको आरोप गलत रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले एकोहोरो मारिएको भन्दै आरोप मात्रै आफूहरूले खेपिरहेको बताउँदै घटना दुःखद् भएको जनाएका थिए । केटीपक्षका आफन्तले केटापक्षका आफन्तलाई ‘हत्यारा’ भन्दै किटानी जाहेरी सिमेत दिएका थिए । तर पनि उनीहरूले यस विषयमा केही पनि बोलेका थिएनन् । उनीहरूले पनि घटनाबारे अन्य कुराको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । केटापक्षका माइला भेना जगत राना मगरले घटनाबारे केटीको पूर्वप्रेमीले फँसाउने जुक्ति निकालेको हुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यतिबेला उनी मात्रै मिडियामा आएका थिए ।
केटीपक्षले मृत्यु शंकास्पद भन्दै किटानी जाहेरी नै दिएपछि केटापक्षका केही व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए । उनीहरूमाथि जिल्ला अदालत सुनसरीबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप्दै प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।
घटना घटिसकेपछि सिंगापुरे लाहुरे आइतले पनि एउटा पत्र पठाएका थिए । पत्रको अन्तिममा ठोस प्रमाण जुटाएर सख्त कारवाहीको माग गर्दै उनले आफूमाथि खेलवाड भएको बताएका थिए । उनको पत्रअनुसार उनले श्रीमतीसँग अन्य अनैतिक क्रियाकलाप थाहा भएपछि आत्महत्याको कारक बन्न सक्ने दावी पनि गरेका थिए । उनले फेसबुक लगइन गर्ने व्यक्तिले नै यस्तो अवस्थामा पुरयाएको बताएका थिए ।
‘वास्तवमा हामीले कुनै टर्चर पनि दिएका थिएनौं, हामीले हत्या पनि गरेका होइनौं, खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन’, अदालत परिसरबाट आफन्त रिहा भएपछि भेना जगतले भने, ‘सत्यको जीत भएको र न्याय मिलेको महसुस गरेका छौं ।’ उनले फेसबुक लगइन गरेर अश्लील फोटो माग्ने व्यक्तिले नै यस्तो घटना घटनाएको हुनसक्ने आफूहरूको आंकलन रहेको बताए ।